Hubi haddii iPhone-gaagu lacag la’aan yahay
Haddii aad rabto ogow haddii iPhone-kaagu furan yahay, halkan waxaan ku siineynaa adeeg si aad ugu hubiso dammaanad buuxda. Ogow haddii aad iPhone waa lacag la'aan ama aan ahayn sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah.
Ogaanshaha xaalada isku xirnaanta iPhone-keena ama iPhone-ka ee aan dooneyno inaan helno waa muhiim si loo badalo shirkada taleefanka mustaqbalka iyadoo looga dan leeyahay in lagu keydiyo biilasha, ama si fudud loogu talagalay kala duwanaanshaha inaan si joogto ah loola xiriirin shirkad. Markay iPhone ka aqbasho kaararka nooc kasta oo shirkad ah, waxaa loo yaqaanaa "bilaash" iPhone, taas oo ah, waxaan ka isticmaali karnaa kaararka SIM ka hawl wade kasta oo aan lahayn nooc xaddidaad ah iyo habka ugu fudud ee ugu macquulsan.
Sida loo ogaado haddii ay iPhone bilaash tahay
Sidaa darteed, haddii aan dooneyno inaan helno qalab gacan labaad ah oo iPhone ah, waa sidaas darteed in iibsadaha mustaqbalka uu ogaado haddii iPhone uu lacag la'aan yahay ama uu ku xiran yahay shirkad taleefan, haddii kale, ma awoodi doonaan inay u adeegsadaan qalab kale kaarka hawlwadeenka midka ku xidhan iPhone-ka. Sidaa darteed, tallaabo muhiim ah ka hor intaadan iibsan iPhone, waa inaad hubisaa inuu bilaash yahay waana u isticmaali karnaa shirkadda taleefanka ee aan rabno. Si aad u ogaato haddii iPhone-kaaga la furay, waxaan kuu soo bandhigeynaa adeeg fudud oo dhakhso leh, waa inaad kaliya gelisaa xogta ku qeexan foomka, waxaad heli doontaa emayl leh warbixin xogta la codsaday ku dhowaad shan iyo toban daqiiqo (xaaladaha qaarkood gaar ah) dib ayey u dhigi kartaa illaa 6 saacadood).